Home News Afhayeenka Gobolka Banaadir oo Durba Bilaaway Musuq Maasuq
Afhayeenka cusub ee Gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar ayaa bilaabay inuu ku kaco fal musuq maasuq ah, isaga oo laba bilood kaliya jooga Xafiiska Shaqada ee Gobolka Banaadir.
Saalax Xasan Cumar oo ku shaqeeya qol ku yaalo Xarunta Gobolka Banaadir oo uu ku shaqeyn jiray Agaasimihii hore ee Idaacada Gobolka Banaadir C/fitaax Arizona, ayaa la sheegayaa inuu hadda bilaabay lunsashada dhaqaale loogu talo galay Saxafiyiinta Gobolka Banaadir.
Waxaa xumaaday xiriirka u dhaxeeya Bahda Saxaafadda iyo Gobolka Banaadir, kadib markii bahda Saxaafadda qarashaad uu ugu talo galay duqa Muqdisho oo loo soo dhiibay Afhayeenka uu leexsaday, sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo muhiim ah.
Saalax Cumar Xasan oo ku magac dheer Saalax dheere, ayaa wararka waxa ay sheegayaan inuu doonaayo hanti inuu ka sameeyo musuq maasuqa iyo lunsashada qarashaadka bahda Saxaafadda laga siiyo xarunta Gobolka Banaadir, maadaama maalin waliba xarunta dowladda hoose ay u shaqo tagaan suxufiyiinta oo ku shaqeeya marxalad adag.
Suxufi ka tirsan Idaacada ku hadasha Afka Codka Gobolka Banaadir ayaa sheegay inaysan jecleysan hab dhaqanka guracan ee Afhayeenka cusub ee Gobolka Banaadir ahna Agaasimaha Idaacada Gobolka Banaadir.
Sidoo kale dadka cabashada ka ah Afhayeenka cusub ee Gobolka Banaadir, ayaa waxaa ka mid ah Sawir qaadaha Gobolka Banaadir Asad Sheekh Cali (Jabiiba), kaasi oo sheegay in dhaqaalaha laga soo qaado Duqa Muqdisho uu si toos ah u leexsado Afhayeenka cusub.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir C/raxmaan Yariisow, ayaa dhawaan ku hanjabay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono Shaqaalaha Gobolka Banaadir ee sameeya Musuq maasuq.
Dowladda Somaliya ayaa muddooyinkii dambe waxa ay baaris iyo dabagal ku haysay shaqsiyaad kala duwan oo lala xiriiriyay inay raad ku leeyihiin eedeymo ku aadan musuq maasuq iyo lunsashada hanti dadweyne.
Previous articleRW Kheyre “Ama Ducaale ayaad magacaabeysa ama anigaa is casilaayo” Akhriso
Next articleSaraakiil Katirsan Jabhada Onlf oo Kulamo La Qaatay Dowladda Itoobiya